Top 5 Free WMV Players maka Mac Nhọrọ
A Windows Media Video faịlụ (WMV), bụ a na-ewu ewu video format mepụtara Microsoft. Otú ọ dị, Apple PC ma ọ bụ ngwaọrụ ga-enwe ike playback ma ọ bụ na-akwado Microsoft si ala faịlụ Ọkpụkpọ. N'ihi ya, odida nke Apple si QuickTime ọkpụkpọ na-egwuri egwu azụ .wmv faịlụ.
Otú ọ dị, ị nwere ike iwunye ụfọdụ nkwụnye ins ịgbakwunye ala nkwado maka WMV faịlụ na gị QuickTime na Mac, ma ọ bụ nanị anya elu maka ọzọ 3rd ọzọ WMV Player maka Mac. Ebe a, m ga-ewebata top 10 WMV Player maka Mac-enyere gị aka playback na WMV faịlụ na Mac OS X (Mavericks & Mountain odum gụnyere).
Nkebi nke 2: tọghata WMV video na-dakọtara na Mac
VLC dị ewu WMV ọkpụkpọ. Ọ bụ a cross-ikpo okwu mgbasa ozi ọkpụkpọ dakọtara na Windows, Mac na Linux os. Ọ na-ahapụ ị na-egwu ihe ọ multimedia faịlụ yana DVD, Audio CD, VCD, na ndị ọzọ. Ọzọkwa ọ na-akwado multiple codecs dị ka MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3, wdg
The enthusiasts nke QuickTime Player 7 ga-achọpụta na ha nwere ike playback na WMV faịlụ na-enweghị ihe ọ bụla nkwụnye na arụnyere. Yeah, QuickTime Player 7 nwere mma-akwado maka codecs. Ya mere ọ bụrụ na ị na-emetụta na iji okenye mbipute nke QuickTime, ọ bụghị ihe a ọjọọ echiche afterall iji wụnye QuickTime Player 7 dị ka gị Mac WMV ọkpụkpọ.
Nke a WMV ọkpụkpọ maka Mac-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na-ewu ewu n'ihi na nke obosara ọdịyo na video format nkwado, onye ọrụ-enyi na enyi interface nakwa dị ka sleek ma kensinammuo imewe. M na ya onwe kwere nke a dị ike ọkpụkpọ bụ a kwesịrị-nwere software. E wezụga WMV faịlụ, ọ na-akwado ma na-playbacks ọzọ video formats na QuickTime ada ada na-akwado natively.
Ọ bụ ezie na MPlayer bụghị dị ka ewu ewu dị ka VLC, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị n'ọtụtụ ebe na WMV Player maka Mac ọrụ. Ọ na-akwado ọtụtụ ndị MPEG / VOB, ASF / WMA / WMV, VIVO, QT / MOV / MP4, AVI, Ogg / OGM, RealMedia, Matroska, aku, NuppelVideo na ọtụtụ ndị ọzọ.
A na ngwa bụkwa oké DivX Player for Mac. DivX Player awade elu-edu fim, TV na na web obere vidiyo na-eji ire ụtọ video playback ahụmahụ. Na nke a Free WMV ọkpụkpọ maka Mac, ị nwere ike igwu videos dị iche iche formats, dị ka WMV, AVI, DivX, MKV, MP4, wdg
The WMV faịlụ ndị a na-apụtụghị ekwekọghị na Mac PC. Iji-akpọ ihe na WMV faịlụ na Mac na zuru uru nke WMV faịlụ enweghị mmachi (ie na-ekiri ya na QuickTime, dezie ya na iMovie ma ọ bụ FCP, mbubata ya ka iTunes ma ọ bụ wdg), ị ga-mma tọghata WMV faịlụ ka a Mac-dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ. Ime ya, i nwere ike ịnwale Video Ntụgharị maka Mac. Ọ na-enyere gị iji tọghata ọ bụla video ruo 30X ngwa ngwa na-enweghị àgwà ọnwụ.
Nzọụkwụ 1:-agba ọsọ a software na mgbe ahụ mbubata gị WMV faịlụ na na interface site adaba ikpuru-na-dobe atụmatụ. Nzọụkwụ 2: Na mmepụta Format ndepụta, ị nwere ike họrọ ihe mmepụta format dị ka gị playback mmasị. Nzọụkwụ 3: See tọghata na ala-nri akuku nke interface.
Ị nwere ike juputara dozie WMV faịlụ incompatibility na Mac-eji nke a kacha video Ntụgharị.
Maka nkọwa ndị ọzọ, ị nwekwara ike na-ezo aka video nkuzi n'okpuru:
10 ihe ị na-ekwesịghị kwalite ka Mac OS X El Capitan 10,11
> Resource> Mac> Top 5 WMV Players maka Mac Nhọrọ